गफ ! .....: 2010
गजल : खर परालको महिमा
केहि अघि लेखेको यो गजललाई उसबेलै हो सायद यौटा सेर फेसबुकमा बाँढेर अलपत्रै छाडेको रहेछु । आज फर्किएर हेर्दा माया लागेर यता ब्लगमा चारो हाल्दै नयाँ लेख्न नसक्नुको झारो टारेको छु ।
गाउछ किन जिन्दगीले भात र दालको महिमा ।
Posted by दीपक जडित at 3:41 PM2comments: Links to this post
कविता : प्रश्न
लेख्न लगभग विर्षीसकेको अवस्था छ । हरेक दिन नयाँ नयाँ धून बजाउने गरेको सारंगीको तार छिनेपछि गाँस्न या फेर्न अल्छि मानेर कोठाको एकापट्टी भित्तामा झुण्ड्याएझैं पाउँछु आफुलाई आजभोली । यो आजभोली एकदिन भए नि हो भन्नु दुईदिन भए नि लौ भन्नु । आजभोली नै लम्बिएर सग्लो निष्कृय यूग बन्ने भएपछि छट्पटी बढेको छ तर भोली फर्किएर हेर्दा देखिने ईतिहास सुधार्नलाई उर्जा कहाँबाट आयात गर्ने हो आत्तोपत्तो छैन । यहि अवस्था, यहि अकर्मण्यतालाई देखेर हाल्सालै यौटा कविता लेखेको थिएँ 'प्रश्न' शिर्षकमा । उर्जाको कमीले हो या अभ्यासको कमीले लेखिसकेका हरेक कुराहरु आजभोली आफैंलाई चित्त बुझ्दैन । हरेक कुराहरुको अलि बड्ता बोध भएर पो यसो भएको हो कि भनेजस्तो पनि लाग्छ । जे होस् ब्लगमा खाली ठाउँ भर्न यो पल्ट यहि कविताको सहारा भो ।
मात चढेको जुनेली रात
जब डिसेम्बरको हिउँमा कक्रिन्छ
म चर्चको ठुलो क्रस मास्तिर हाँस्ने
सोच्ने गर्छु कि
मैले सल्काईरहेको सिग्रेटभित्रको तमाखु
कहाँ उत्पादन गरियो होला ???
यो प्रश्न हो
यहि त प्रश्न हो
अझ यहि नै त प्रश्न हो
कि म खडा गरिरहेछु
तील तुल्य प्रश्नहरु
र चढिरहेछु पहाड प्रश्नहरुको
जहाँ न आरोहणमा छ जवाफ
जब भोली विहान
यहि चर्चको छानामाथी
एकहुल काला रोविन चराहरु
चिसो हिउँदले जमेको कण्ठबाट
बदलिएको आवाज निकाली कराउन थाल्छन्
जानीजानी म भन्नेछु
कि कागहरुले आजभोली
आफ्नो बोली विर्षीसकेछन्
र सल्काउनेछु अर्को खिल्ली सिग्रेट
बिना जवाफ अर्को प्रश्नसंगै ।
Posted by दीपक जडित at 11:29 AM2comments: Links to this post
गजल : मन उघारेर प्यारी
आज अठोट लिएको थिएँ ब्लगमा केहि त लेख्छु लेख्छु भनेर । कम्प्युटरमा बसेको २ घण्टा बित्दा पनि लेख्ने कुरा केहि नभेटेपछि लाग्यो । ब्लगमा मलाई ब्युँझन अझै समय लाग्ने रहेछ । खै किन हो, लेख्ने कुरा सोच्यो भने मनमश्तिष्क भरी डम्म कुहिरोले ढाकेझैं हुनथालेको छ त्यसैले त हेर्नुस् न मेरो ब्लग घाम नलागेर ओसिएको विस्कुन भएको । लेखेर हैन लेखिसकेको कुरा राखेर भएपनि ब्लगमा लेखें भन्ने यौटा मिती अँकित गरेर ब्लग जगतबाट हराईगा'को चैं छैन है भन्नलाई यो गजल राख्दैछु -
पत्र-पत्र ति मोतिदानाझैं शीत झारेर प्यारी ।
सक्दिनं टिप्न म गुलाफको यौवन मारेर प्यारी ।
नसम्झ रित्तै छु उभिएको तिम्रो सामुन्ने आज,
हेर त फूलै हाँसेको होला मन उघारेर प्यारी ।
यो फूल बरु वैलाईजाला टाँसेपनि छातिमा,
वैलन्न प्रिती टाँस मुटुमा गाढा पारेर प्यारी ।
प्रेम मिलनको दिनमा हामी हाँसीरँ'दा ईत्रेर,
नरोओस् गुलाफ हाम्रो सामुन्ने बैंश हारेर प्यारी ।
गुलाफ हाँस्ने बगैंचामाझ म बस्छु पर्खिएर,
आउनु तिमी नलिई फूल त्यो मन खारेर प्यारी ।
यो गजल गत भ्यालेण्टाईन डेको बेला खसखस डटकमको निमित्त लेखेको थिएं ।
Posted by दीपक जडित at 11:05 AM4comments: Links to this post
गीत : जीवन र मन
यसरी पनि निमोठिंदो रै'छ यो मन चियाको पालुवा जस्तै
फुस्किंदै जाने जति कसेपनि जीवन मुठ्ठीको वालुवा जस्तै ।
मन कहिँ त न्यानै रहन्छ सम्बन्धहरु ई चिसिए पनि
जीवन नदि यो बगिरहन्छ हरक्षण सागरमा मिसिए पनि
उडि हिंड्दछ बरालिएर यो मन सिमलको भूवा जस्तै
उज्यालो थोरै पोतेर मनमा ओठ खोलेर हाँस्दछ जीवन
घेरिएर पनि अँध्यारोहरु माझ एकै आशामा नाच्दछ मन
सल्किएर आफैं आगो जीवनमा यो मन उडेको धुँवा जस्तै
ब्लगमा नियमित हुने अनेक प्रयास गर्दापनि सकिराखिएको छैन । अनावश्यक ब्यस्तताले गर्दा मनमा उर्लेका भावनाहरुलाई तह लगाउन पनि सकिएको छैन । यसपटक पनि ब्लगलाई माया मारेकै चैं छैन भन्ने जनाउन लामो समयपछि लेखेको यो गीत लिएर आएको हुं । आसा छ समय अनुकुल पर्ने छ र अगाडीका दिनमा अलि लगनले ब्लग लेखिनेछ ।
Posted by दीपक जडित at 11:48 PM7comments: Links to this post
कविता : आकाश अनि ऐंठन
चोक्टा चोक्टा भएर
र थिचिरहेछ मलाई
रातैभरी ऐंठन पार्ने गरेर
बज्र धर्ती टेकेर
मेरी आमा अझै
धारे हात लगाउँदैछिन्
'जेमराज' राते लागेको हैन
खडेरीले डढेका हुन
उनको गर्भमा राखिएका ब्याडहरु
मेरो छातीमाथि क्रमश
रातैभरी ऐंठन पार्ने गरेर ।
Posted by दीपक जडित at 12:02 PM 1 comment: Links to this post
आफ्नै मनको आज्ञाले हुन सक्छ अथवा हुनसक्छ आफ्नै मनको अवज्ञाले म बितेका २ महिना देखि ब्लगमा देखा परिंन ।
यसको कारण यतिखेर ब्लगमा लेख्न खोज्ने हो भने सत्य भन्दा अलिपर पुगिएला त्यसैले सम्भावित कारणबाटै थालनी गरें दुई महिने विश्राम पछिको यो ब्लग ।
आजदेखि पुन ब्लगमा फर्किन्छु, यौटा नियमिततामा ब्लग लेख्छु भन्ने अठोट बाहेक अर्थोक त केहि रहेनछ फेरी यहि ब्लगलाई पनि जो ब्लगमा पस्नुहुने पाठकहरुलाई केहि महत्वको देखियोस् । त्यसो त केहि न केहि बनाएको भए नहुने कुरापनि थिएन तर यो पुनरागमन यस्तै नै होस्, यत्ति नै होस् ...............
सबै ब्लगर साथीहरुलाई नमस्कार !!
Posted by दीपक जडित at 10:08 PM5comments: Links to this post
गफ : ब्लगलेखनको 'लेट', ब्लगरहरुसँगको भेट
कुनताको समय, सुलुत्त चिप्लेर जाने त्यसमाथी एक महिना, यो अवधिलाई कत्ति छिट्टो बित्यो भन्नुपनि भन्नु मात्रै हो । रफ्तार समयको उहि हो तरपनि बुझ पचाएर वा आफु ढिलो भएर समय कत्ति छिट्टो बितेछ गाँठे! भन्नेहरुमा म पनि पर्छु ।
मान्छेले आयूको प्रतिशत भागहरु जति धेरै बिताउँदै जान्छ उति उस्लाई समय छिट्टो चिप्लेजस्तो लाग्छ । बच्चा हुँदा दशैँ तिहार जस्ता चाडबाडहरु कहिल्यै नआईपुगे जस्तो लाग्ने मान्छेलाई जति धेरै दशैँ तिहार ईत्यादि चाडबाड भोग्दै जान्छ उति धेरै भन्दै जान्छ, 'कति छिट्टो आउन सकेको हो यो चाडबाड पनि।'
यसलाई हामी आर्थिक बोझ उठाउनुपर्ने भयको कारणले यस्तो लागेको भन्ठान्छौं तर आयूको प्रतिशत भागहरु धेरै बिताउँदै जाँदा अभ्यस्त भएर यस्तो लागेको भन्दारहेछन् पश्चिमाहरु । कुरा दुईवटै उस्तै हो हुनत तर सोचाईमा सकारात्मकता देखिन्छ उनिहरुको भने हामीहरु आफैंलाई अनावश्यक चिन्ता दिन्छौं ।
कुरा समयकै आयो ।
बहाना छिट्टो बित्यो भन्ने पर्यो ।
चिन्ता ब्लगमा एक महिना लेख्न नसक्नु भयो ।
उसो त पहिल्यै अनुमान थियो मलाई ब्लगमा उपस्थिती उस्तो सहज हुनेछैन भन्ने । त्यसैले अघिल्लो पोष्टमा लेखेको पनि थिएँ भन्न सक्दिनं ब्लगको उपस्थिती कस्तो हुने हो भनेर । आज भन्न सक्छु ई यस्तै भयो ।
फेब्रुवरी १४ मा काठ्माण्डौ झरेको मैले आज मार्च १४ भैसक्दासम्म ब्लगको दैलो ढप्क्याई राखेको थिएँ । आज खोल्ने मौका जुर्यो । जुर्यो के, जुराएँ भनुँ न; यसबिचमा पनि ब्लगको दैलो उघार्न आएको भए हुन्थ्यो कसैले ब्लगिङ्गमा बन्द हड्तालको कार्यक्रम राखेका त थिएनन् । तर घरपरिवार, ईष्टमित्र, नरनाताहरुसँगको भेटघाटमै रमाईलो मानेर हो मैले ब्लगमा लेख्ने कामलाई जय भोली! भन्दैरहेँ ।
फेब्रुवरी १५ मै पूर्वतिर हान्निएको म मार्च आठमा पुन काठ्माण्डौ फर्किएँ । घरतिरको बसाईमा एकप्रकारको रमाईलो भएपनि छट्पटी पनि उत्तिकै भैरह्यो । के गरौं? कता जाउँ? यो समय म त्यसै नष्ट गर्दैछु भन्ने उखरमाउलोलाई शान्त पार्नकै लागी काठ्माण्डौ फर्किएको थिएँ म । खासगरी छोरीको परिक्षा चलिरहेकोले म घरमा हुँदा उनलाई अध्ययनमा बाधा परिरहेको महसुस गरेको थिएँ मैले । काठ्माण्डौ फर्केपछि काठ्माण्डौ भित्रै रहनुहुने केहि ब्लगर साथीहरुलाई भेट्ने निश्चयले सम्पर्क गर्नतिर लागेँ म ।
पहिलोपल्ट क्याफे मंगलमका ब्लगर मित्र जोतारे धाइबाजीलाई फोन सम्पर्क गरेँ र भेटेँ । धाइबाजीसँग पहिलो पल्टको भेट मलाई बिल्कुलै पहिलो पल्टको भेट जस्तो नलागेर लामो समयसम्म घनिष्टता रहेको साथीलाई केहि समयान्तरमा भेटेको जस्तै सहज र आत्मिय लाग्यो । वागबजारको कुनै कुनातिर प्रविष्ट भै मिठो चिया पिउँदै धाइबाजीसँग ब्लगका, अन्य ब्लगर मित्रहरुका लगायत अरु विषयहरु माथिपनि केहिबेर गरिएको मिठो कुराकानी सहितको त्यो आत्मिय भेट मेरो सम्झनामा सँधै मिठो भएर रहनेछ । साथमा अन्नपूर्ण पोष्टकि स्तम्भ लेखिका नारायणी देवकोटाजी सँग भेट्न पाउँदा पनि हर्षित थिएँ म ।
अर्कोदिन अर्को ब्लगर मित्र कुटीकि कैलाश राईजीसँग फोन सम्बाद गर्न सफल भएँ र लागेँ भेट्नलाई थापाथली स्थित मार्टिन चौतारीमा । कैलाशजी मार्टिन चौतारीकि अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएको भएपनि मेरो परिचयमा ब्लगर नै धेरै हुनुहुन्थ्यो । मार्टिन चौतारी पुगेर कैलाशजी कहाँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा अलि थप चिनेँ । धाइबाजीसँगकै जस्तो सहज र आत्मिय लाग्यो कैलाशजीसँगको पहिलो भेटघाट पनि । कति स्नेहमयि भने पहिलोपल्ट भेट्दैछौं भन्ने त ठ्याम्मै लागेन । कैलाशजीसँगको छोटो भेटघाटमा मार्टिन चौतारीको कार्यालय भित्रको पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष आदि सर्सर्ती हेर्ने अवसर पनि जुर्यो । समसामयिक विषयवस्तुहरुमाथी छलफल गर्ने गराउने, अनुसन्धान गर्ने तथा तत्सम्बन्धि पुस्तकहरु प्रकाशन गर्ने मार्टिन चौतारीका सबै साथीहरु, कैलाशजी समेत, लाई चौतारीका कार्यहरु सफल र प्रभावकारी बनुन् भन्ने मेरो शुभकामना त्यतिबेलै मनमनै चुहाएँ जतिबेला कैलाशजीले विद कम्प्लिमेट मार्टिन चौतारी भन्ने छाप ठोकेर मलाई दुईवटा पुस्तकहरु उपहार थमाउनुभयो ।
दुबै ब्लगरहरु धाइबाजी र कैलाशजीसँग भेट हुँदा अरु दुईजना ब्लगरहरु मेरो विचार र अभिब्यक्तिको साझा चौतारी चलाउनुहुने ब्लग गुरु दिलिप आचार्य र मेरो फोटो ब्लग नामको ब्लग चलाउनुहुने फोटो ब्लगर सुजन शर्मासँग भेट्न जाने सल्लाह गरेको थिएँ । यहाँ भने हामीलाई चिठ्ठा पर्नेवाला थियो । एकजना ब्लगरलाई भेट्न जाँदा दुबैलाई भेटिने । वहाँहरु दम्पति नै ब्लगर हुनुको क्या मिठो फाईदा! अर्कोदिन हामी; धाइबाजी, कैलाशजी, म र मेरो एक झापादेखि साथै आएको मित्र साँझतिर पुग्यौं गहना पोखरी स्थित दिलिपजी र सुजनजीको निवासस्थान । वहाँहरु दुबैजना हाम्रो ब्यग्र प्रतिक्षामा हुनुहुन्थ्यो । हामीले खुत्रुक्कै यहि समयमा आउँछौं भन्न नसकेको र अलि बेलैमा पुग्न नसकेको शरम अलिअलि उदाएथ्यो मेरो मनमा वहाँहरुलाई कुरायौं भनेर तर वहाँहरुसँगको पहिलो भेटको सहजताले त्यो शरम कहाँ बिलायो कहाँ ? तेस्रोपल्ट पनि ब्लगको साईनो लिएर ब्लगर मित्रहरु भेट्न जाँदा स्थिती अन्यन्तै सहज र आत्मिय पाएपछि मलाई लाग्यो ब्लगले परोक्ष रुपमा जोडेको नाता त प्रत्यक्ष भेटघाट भै रहने नाता भन्दा पनि धेरै प्रगाढ पो हुने रहेछ । सुजनजी र दिलिपजीको हार्दिकतापूर्ण न्यानो आतिथ्यमा रमाउँदै, वहाँहरुको मायालु छोरीलाई पनि भेटेर अनि केहिबेर विविध कुराकानी गरेर फर्कियौं हामी ।
जम्माजम्मी ३ महिनाको बसाईमा अब बचेको २ महिनामा नेपालभित्र रहनुहुने अरु ब्लगरहरुसँग भेट्ने मेसो जुर्ला कि नजुर्ला ? दिलिपजीले अरु ब्लगरहरुसँग पनि भेट्ने हिसाबले ससानो बनभोज आयोजना गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नुभएको थियो साँच्चै त्यसरी यौटा कार्यक्रम बनिदिए कति रमाईलो हुन्थ्यो होला !
काठ्माण्डौको धुँवाधुलो, घचम्घच्ची भीडभाड र कोलाहलबाट म भने चारजना ब्लगरसाथीहरुसँगको आत्मिय भेटको न्यानो बोकेर हिँजो १३ तारिख बिराटनगर फर्किएँ । आज अझै पूर्व पुग्नुथियो तर पूर्वमा भएको बन्दले विराटनगरमा थन्क्याईदियो । र थन्किनै पर्दाको समयलाई उपयोग गर्दै ब्लगको दैलो खोल्ने साईत पनि जुर्यो । जाँदाजाँदै यसपटक नेपाल आएर लेखेको (नेपालमै देखेको) यो गजल छोड्न चाहन्छु तपाईंहरुलाई ।
मान्छेहरु अझै यो बस्तिमा हाँसेकै रा'न् ।
दुखाईमा होस् या होस् मस्तिमा हाँसेकै रा'न् ।
सुनिन्थ्यो मुर्कुट्टाहरु हिंड्छन् राती राती,
पुलिसहरु तर गस्तिमा हाँसेकै रा'न् ।
गिराएर आफ्नै मूल्य कौढीबाट तल,
ढुक्कले अरुको प्रसस्तिमा हाँसेकै रा'न् ।
यहि 'आज' पो सुखद हुन्छ कि मान्छेको,
सम्झेर आफ्नै हिँजो अस्तिमा हाँसेकै रा'न् ।
हाँस्नु छ मान्छेलाई अकारण नै हाँस्नु,
देखियो मान्छे जबर्जस्तिमा हाँसेकै रा'न् ।
Posted by दीपक जडित at 6:32 AM 14 comments: Links to this post
यसपटकलाई मैले आफ्नै कथाहरु मात्र राख्ने गरेको अर्को ब्लगबाट यो लघुकथा यता घिसारेको छु । यसो नगर्दा पनि नहुने हैन तर यस ब्लगलाई मैले आफ्नो मूल ब्लग मान्ने भएकोले र प्राय अन्य ब्लगका सामाग्रीहरु सबै यस ब्लगमा समेत राख्ने भएकोले यसो गरेको हुँ । यो लघुकथा मैले साहित्यानुराग द्वैमासिकका सम्पादक सूर्यराज गिरीको अनुरोधमा नेदरल्याण्डबाट प्रकाशित हुने सोहि पत्रिकाको निमित्त लेखेको थिएं । यसकथामा मेरो कथाहरुको ब्लगमै पुगेर वसन्तजीले र ओजोनजीले प्रतिक्रिया लेख्नुभएको थियो त्यसलाई पनि मैले कथा सँगै यता तानेर ब्लगको पुछारमा राखेको छु ।
लामो समयको परदेश बसाईपछि म केहि दिनलाई घर फर्केको थिएँ । म आएको थाहा पाएकै दिनदेखि मेरा एक मित्रले खाना खाने निम्तो गर्दै मलाई बारम्बार फोन गर्ने गर्दथे । एक त आफ्नै ब्यस्तता त्यसमाथि छिरिक्क कतै निस्कन नसकिने गरेर मौलाएको बन्द संस्कारको वावजुध एक साँझ मित्रलाई फोन गरेर उनको घर पुगें म ।
म पुग्दा मेरा मित्र रीसले चुरचुर भएर लगभग काम्न लागेको अवस्थामा थिए । उनको आँखा हेर्दा लाग्थ्यो आँखैमा उनले आगोको खेती गरेका छन् । उनको सामुन्ने उनकि श्रीमती र कामगर्ने बाह्र/चौध वर्षे केटो सातोपुत्लो उडेझैं थर्कमान अवस्थामा थिए । स्थिती नियाँलेर मैले मित्रलाई शान्त बनाउने प्रयास गर्दै के भएको हो जान्न चाहें ।
मित्रले बिस्तार लगाए अनुशार त्यो बाह्र/चौध वर्षे केटोलाई बजारबाट केहि विदेशी रक्सी किन्ने जिम्मा लगाईएको रहेछ जो बन्दको कारणले उसले पुरा गर्न सकेन । त्यस्तै उनकी श्रीमतीलाई खसीको मासु बनाउन सुझाईएको रहेछ त्यो पनि बन्दकै कारण उनले पुरा गर्न सकिनछन् र त्यति कारणले मेरा मित्र दुर्वाशा बनेका रहेछन् । मैले 'त्यो सब कुराहरु नभए पनि यतिका वर्षपछिको भेटमा हामी त्यसै रमाईलो मान्न सकिहाल्छौं नि । आँखिर मित्रतामा हार्दिकता भन्दा ठुलो अर्थोक के हुन्छ र?' भनेर सम्झाएपछि मेरा मित्र राम्रै सेलाए र हामीले जे भएको खानपान गर्यौं र त्यो साँझलाई निक्कै आत्मिय बनायौं ।
निक्कै सौहार्दपूर्ण बातचित, खानपान सकेर म विदा हुँदैथिएं, मेरा मित्रले फेरि एकपल्ट मलाई खसीको मासु खुवाउन र विदेशी रक्सी पियाउन नसकेको प्रति खुनखुन गर्दै एक एक मेलो कामगर्ने केटोलाई र श्रीमतीलाई हपारे र म तिर मुखरित हुँदै 'यो देशमा कहिल्यै शान्ती नआउने भयो बुझ्नुभयो ?' भन्दै मलाई विदा गरे ।
फर्कंदा बाटोभरी मेरो मनमा कुरा उठिरहयो, 'के शान्ती कुनै मिति हो र यो यसबेला आउनुपर्छ भन्नलाई ? र शान्ती कुनै स्थान पनि त होईन जो यात्रामा हिंड्दा फलानो ठाउँपछि आउँछ भन्न सकियोस् । जाबो खसीको मासु र रक्सी नजुट्दैमा आफ्नै घरको शान्ती त्यस्तरी खल्बल्याउने मेरा मित्रले कस्तो शान्तीको प्रतिक्षा गरेका होलान् ?' मेरो मगजमा यो प्रश्न निरुत्तर रहिरहयो ।
देशको राजनीतिको प्रसंगलाई मिसाएर नेपाली पुरुष मानसिकतालाई कठोर ब्यंग्य गर्नुभएको रहेछ। ठिक गर्नुभयो! हाम्रो समाजको दुर्गतिको मूल कारण यहि मानसिकता हो।
तपाईका कथाहरुमा जीवन भोगाई र समाजिक संरचनाका विविध भेदको विचित्र संमिश्रण छ । एकै कथा भित्र विविध विषयको संदेश र परिवर्तनवादी विषय बस्तुले पक्कै पनि गतिशिल सन्देश बोकेका छन् ।
तपाईका कथामा पात्रले यर्थाथ बकेको छ । बास्तवमै प्रश्न निरुत्तर छ । समस्या गम्भिर छ ।
Posted by दीपक जडित at 5:29 PM2comments: Links to this post
क्रम फेरी उहि पहिले नै लेखिएका तर ब्लगमा नराखिएका मध्येको अर्को यौटा गजलको परेको छ । समयान्तर र अवस्थाको समेत अन्तरले यसको मतला शेर मेटाएको छु । मेटाएको के भनुँ हाललाई लुकाएको हुँ ।
लाग्छ हुँ त्यो बगैंचा म उजाडिंदै गैरहेको,
फेरी हरियाली भर्ने जस्को कुनै माली छैन ।
भेट्नो जस्तै छुट्टिएँ कि हाँगापात दुबैतिर,
ईच्छा अडिने'थ्यो तर कतै अड्ने डाली छैन ।
बाध्य छु म हत्केलामै मुटुलिई खोजीगर्न,
भेट्दा तर स्वागतार्थ आरतीको थाली छैन ।
भन्थें चाल्नो भएको छ मुटु घोच्दा वचनले,
वचन् चाल्न खोज्दा तर त्यै मुटुमा जाली छैन ।
Posted by दीपक जडित at 9:18 PM5comments: Links to this post
यतिखेर कुनै निश्चित समय लिएर कुनै निश्चित कुरा लेख्न सक्ने एकाग्रता नभएको अवस्थामा छु म । एक त यात्रावधीमा त्यसमाथी सजिला अप्ठ्यारा अनेक कुराहरुसँग जुधिरहँदा मनमा आएका अनेक तर्कनाहरुले कुनै आकार लिन सकिरहेका छैनन् । अक्सर हुन्छ यस्तो हुनत जस्तो कि लाग्छ म भित्र निक्कै गतिलै विषयमा मन्मथ भैरहेछ र निक्कै ठुलै नौनी मथेर निकाल्ने छ यो मनले तर पानी मथ्छ क्यार घरीघरी यो मनले नौनी निस्क्ने बेलामा त फुस्सा पो हुन्छ । यस्तै मथाई पछिको यो फुस्सा नौनी, अत्यन्तै ब्यस्तताका वावजुध टिनियान टापूबाट ब्लगमा पोष्टिङको एक अंक थप्नै सहि यो कविता -
नबाँध्नु मनलाई बाँध्नै परेपछि
मनकै डोरीले बाँध प्रेमीहरु हो
नफुस्किने गरी मनहरु
मनकै बन्धनभित्र कैद भएर
मनकै घेराभित्र टाढा भएर
मन बाँध्ने र फुकाउने
रहनेछैन तिम्रै पनि मन
ए प्रेमीहरु हो
धेरै धेरै किन देखिरहेछु
फगत मन बाँध्ने र फुकाउने
कसिलो गरेर ।
Posted by दीपक जडित at 6:34 PM6comments: Links to this post
तिम्रो लागी बाँचे कि बाँचिन म ?
यत्ति थाहा छ तर
आजसम्म बाँचेको रहेनछु म
यो बँचाई भन्ठानेथें
मेरै लागी मात्र बाँचेको छु मैले
छोप्न खोजेँ हत्केलाहरुले
आफ्नो लागी कहिल्यै नबाँच्नुको लाज
आफैंलाई खुवाएको ढाढस
उल्टै छाद्नुपर्दा मुखबाट
थाहा पाएको छु
कति नमिठो रहेछु म
आफ्नो लागी बाँच्न खोज्दै गर्दा
आफ्नै प्रिय रहेनछु म
त्यसैले त अझै
दह्रो छु दह्रो म
नपरेर पनि आफु
आजसम्म बाँचेको रहेनछु म ।
Posted by दीपक जडित at 2:33 AM9comments: Links to this post
केहि समय अगाडी मैले दौंतरीमा यौटा लेख पढेको थिएँ, सगरमाथा, माउण्ट एभरेष्ट कि नौबन्धन शिर्षकमा । ज्योतिर्गमय : A movement toward east ब्लगका ब्लगर, जस्लाई म आध्यात्मका यूवा चिन्तक भनेर चिन्ने गर्दछु, निर्मलमणि अधिकारी -आयोदधौम्यले लेख्नुभएको उक्त लेख वहाँकै ब्लगमा पनि पढ्न सकिन्छ । लेख सगरमाथाको पौराणिक नाम के थियो र कसरी राखिएको थियो भन्ने जानकारी गराउँदै हामीले सगरमाथाको आफ्नै नाम प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने तथा विदेशीहरुले राखिदिएको नाम त्याग्नुपर्ने आसयमा लम्किएको छ । म आफु वर्षौं देखि बिदेशमा भासिएको ब्याक्ति भएकोले राष्ट्रवादका नारा उचाल्दै हो सगरमाथाको नाम नौबन्धन नै हुनुपर्छ भन्ने पैरवी गर्न चाहन्न । अर्कोतिर हामीसँग 'सगरमाथा' नाम नै आफ्नो भाषामा उपयुक्त र प्रचलित छँदैछ । यसको पौराणिक नाम नौबन्धन हो भनेर उल्लेख गरिनु अर्थात पौराणिक नाम नौबन्धन हो भनेर प्रचारमा ल्याईनु सम्म अर्को कुरा हो । ईतिहासविदहरु तथा सम्बन्धित निकायको ध्यान त्यता जावोस् र सगरमाथाको पौराणिक नाम नौबन्धन हो भन्ने आधिकारिक अभिलेख बनोस् । त्यतिको निम्ती मेरो पनि कामना रहनेछ ।
लेखको आसय जता भएपनि लेख पढिरहंदा मेरो ध्यान भने सगरमाथाको नाम नौबन्धन रहन जानु पछाडीको कथाले तान्यो । यसबारेमा पहिले कुनै जानकारी थिएन मसँग कि महाभारतको वन पर्व अन्तर्गत आउने मत्स्यावतारको कथा अनुसार माछोको वचन सुनेर हिमालको चुचुरोमा नाउ बाँधियो र सगरमाथा, उ बेला व्योमकूट पर्वत पनि भनिन्थ्यो, को नाम नौबन्धन रहन गयो । महाभारतको कथामा आफुले थाहा नपाएको कुरा भएकोले मैले निर्मलमणिजीलाई ईमेल मार्फत यसबारेमा सोधेको थिएँ कि किन हिमालको चुचुरोमा नाउँ बाँध्नु भनियो ? मलाई 'के त्यसबेला पृथ्वीमा महाप्रलय हुने सम्भावना भएर त्यसो भनिएको थियो होला' भन्ने कुरा जान्नु थियो । निर्मलजीले मलाई यसबारेमा जान्न पहिले मदनमणि दिक्षित ज्यूको 'त्यो यूग' भन्ने पुस्तक पढ्न अनि यसबारेमा वहस गर्न सल्लाह दिनुभयो । यतिखेर मैले भनेजस्तै सजिलो गरेर दिक्षित ज्यूको किताब फेला पार्न सक्दिंन बरु नेपाल गएको बेला पढ्ने किताबहरुको लिष्टमा 'त्यो यूग'लाई पनि राखेको छु । हार्दिक धन्यवाद निर्मलमणिजीलाई यौटा पुस्तक पढ्ने सल्लाह दिनुभएकोमा ।
लेखमा हिमालको चुचुरोमा नाउ बाँधियो भन्ने कुरा पढिरहँदा म मा किन हिमालमा नाउ बाँध्नु भनियो भन्ने कुराको स्वभाविक जिज्ञासा उठेको थियो । जवाफ खोज्न आफुसँग सामाग्रीहरु नभएपछि मैले स्वभाविक जवाफ निकालें कि निश्चय नै मत्स्यावतारको त्यो समयमा पृथ्वीमा महाप्रलय हुने सम्भावना थियो होला र त्यो प्रलय पृथ्वी पानीमा डुबेर हुने सम्भावना थियो होला । आँखिर तीन खण्ड पानी र एक खण्ड मात्र जमिन भएको यो पृथ्वी पानीले डुब्न नसक्ने भन्ने पनि त छैन र प्रलय कालमा डुब्नुको अर्थ डुबि नै रहनु भन्ने पनि त हुँदैन । एकपटक डुबेर फेरि निस्किए पनि डुबिसक्दा प्रलयमा हुने विनाश त भैसकेको हुन्छ । त्यसैले नै त्यस किसिमको सम्भावित महाप्रलयबाट हुनजाने श्रृष्टीको विनाशबाट मान्छे लगायतका प्राणीहरुलाई बचाउन सकिने एकमात्र साधन नाउ हुनसक्ने हुनाले नाउ बाँध्नु भनियो होला । नत्रभने समुद्र, नदि, ताल, तलैया, खोला ईत्यादिमा मात्र प्रयोगमा आउने नाउलाई हिमालको चुचुरोमा लगेर बाँध्नु वा बनाउनु किन भनिन्थ्यो होला र ?
मलाई अचम्म लागेको कुरा - यहि कुराको कनेक्सन केहि समय अगाडी बजारमा आएको अंग्रेजी चलचित्र २०१२ सँग पनि छ । त्यसमा पनि सन २०१२ मा हुने भनिएको प्रलय पछिको विनाशबाट श्रृष्टीलाई सुचारु राख्नको लागी ठुला ठुला तिनवटा 'आर्क'हरु बनाईएको देखाईएको छ । के महाभारतको कथामा हिमालको चुचुरोमा नाउ बाँध्नु भनिनु र आजको समयमा बनाईने अंग्रेजी चलचित्रमा 'आर्क' बनाईएको देखाईनुमा कुनै कनेक्सन छैन होला त ? वा यो संयोग नै मात्र हो त ? 'नाउ' र 'आर्क' दुबै उस्तै कुराहरु हुन । समय अनुशार यसको सक्षमतामा फरक हुनु अर्कै कुरा । अझ त्यसमाथी पौराणिक कालमा नाउलाई हिमालको चुचुरोमा लगेर बाँध्नु भनिनु बाँधिनु, त्यो हिमाल सगरमाथा हुनु र आधुनिक समयको चलचित्रमा बनाईएको अत्याधुनिक 'आर्क' पनि त्यहि हिमालय पर्वततिरै (चाईनामा) बनाईएको देखाईनुमा पनि कुनै कनेक्सन छैन होला ? संयोग नै मात्र होला ?
मैले केहि साथीहरुसँग यसबारेमा कुरा गरेको थिएँ । किन त्यो चलचित्रमा बनाईएको 'आर्क'हरु हिमालय पर्वतमालातिरै बनाईयो भनेर । केहिले 'चाईनामा भएको ब्यापक जनशक्तिको कारणले त्याँहा बनाईएको हो' भने त केहिले 'ह्या... फिल्ममा भएको यस्तो वाहियात कुराहरुको पछि लाग्ने काम छैन' भने । तर मलाई भने वाहियात नै सहि ठुलै खुल्दुली उठिरहयो यो विषयमा ।
मलाई २०१२ चलचित्रमा हिमालय पर्वतमाला क्षेत्रतिरै आर्क बनाईनु चाईनाको अपार जनशक्तिकै कारणले हो भन्ने लागेन । किनभने पृथ्वीकै विनाश हुन गैरहेको बेलामा त्यसबाट बच्नलाई संसारभरका एलिटहरुले मिलेर बनाउन लागेको उक्त आर्कहरु अरु कुनै सुरक्षित स्थानमा बनाउँदा पनि हुन्थ्यो भने चाईनाको त के जहाँसुकैको पनि दक्ष र प्रयाप्त जनशक्ति लानलाई समस्या हुने कुरै थिएन । पक्कै पनि हिमालय क्षेत्र नै महाप्रलयको बेला बच्न सकिने उपयुक्त स्थान छानिएको हुनुपर्छ । त्यसमा पनि दुई कारणहरु हुन सक्छन् - पहिलो कारण संसारमा भएजति पर्वतमालाहरु मध्ये सबै भन्दा कम ज्वालामुखिको केन्द्रहरु रहेको पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला हो र दोश्रो पृथ्वीमा भएका सात महाद्विपहरु मध्ये सबै भन्दा ठुलो महाद्विप एसिया हो र हिमालय पर्वतमाला यसैमा पर्छ । यि दुई कारणहरु हुन सक्छन् उक्त चलचित्रमा 'आर्क'हरु हिमालय पर्वतमाला क्षेत्रमा बनाईएको देखाईनु ।
थप कुरा के पनि छ भने हामी(पूर्विय दर्शन मान्ने)ले हिमालय क्षेत्रलाई देव भूमी, तपोभूमी मान्ने गर्छौं । त्यसै त हिमालय क्षेत्रलाई देव भूमी भनिएको पक्कै होईन होला । केहि त रहस्य पक्कै नै छ होला यसको पछाडी जस्लाई हामीले पत्ता लगाएर प्रमाणित गर्न नसकेका हौंला । अझ अर्को कुरा श्रृष्टीको स्थिती कायम रहन हिमालहरुको भूमिका सबैभन्दा ज्यादा हुन्छ भन्ने त मानिएकै छ । त्यसैले ग्लोवल वार्मिङको कुराले, हिमालमा हिउँ नहुनुको कुराले र ठुला ठुला ग्लेसियरहरु पग्लँदै गएको कुराले हामी चिन्तित छौं ।
श्रृष्टी, स्थिती र संहारको अवस्थालाई हाम्रो पौराणिक ग्रन्थहरुले तीन अलग अलग देवताहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको छ । जस्तै कि श्रृष्टीकर्ता ब्रह्मा, स्थितीकर्ता विष्णु र संहारकर्ता रुद्र(महेश्वर/शिव) मानिन्छन् । यि तीन एलिट देवताहरु मध्ये ब्रह्मा आकाशमा बस्छन् क्यार , विष्णु समुद्रमा बस्छन् भने संहारकर्ता रुद्र त्यहि हिमालय पर्वतमाला अन्तर्गतको कैलाश पर्वतमा बस्छन् । कतै हिमालको चुचुरोमा नाउ बाँध्नु भनिएको कुरा र हिमालय क्षेत्रमा 'आर्क' बनाईएको कुरा साँकेतिक रुपमा उनै संहारकर्ता रुद्रको शरणमा गएको त हैन ?
यि कुराहरु खासगरी महाभारतको कथामा भनिएको हिमालको चुचुरोमा नाउ बाँधिएको कुरा र अंग्रेजी चलचित्र २०१२ मा हिमालय पर्वतमाला क्षेत्रमा आर्क बनाईएको कुरामा कुनै पनि कनेक्सन छैन होला, यो संयोग नै मात्र होला तर पनि मलाई केहि न केहि कनेक्सन छ कि त ? भन्ने लागीरहन्छ अझै त्यसैले यो वाहियात गफ तपाईंहरुलाई सुनाउन ब्लगमा लिएर आएको हुँ कि पृथ्वीमा महाप्रलयको घडी यदि कुनैदिन आएछ भने पक्कै हामीले देव भूमी भन्ने गरेको हिमालय पर्वतमाला क्षेत्र नै श्रृष्टीलाई पुन सुचारु राख्नको लागी मान्छे लगायतका जीवहरु बचाउन सकिने पवित्र स्थल हुन सक्छ । अस्तु!
Posted by दीपक जडित at 1:34 AM2comments: Links to this post
यसपटक पनि थपक्कै पहिले लेखिएका र ब्लगमा नराखिएका मध्ये यौटा गजल राखेको छु । यसबारे पहिले नै भनिसकेको छु धेरै केहि भन्नु नपर्ला तर गजल माथी गजल खप्नुको पीडा तपाईंहरुमाथी पार्न गएकोमा क्षमा चाहन्छु ।
तमाशा अहो! मान्छे बडा नाङ्गिएको हेर ।
हेर यो जुग शताब्दी नै बाङ्गिएको हेर ।
छैन मूल्य शिरटोपीको शरिर् परै रह्यो,
संस्कार नाङ्गो बाटोबाटै झाङ्गिएको हेर ।
हुद्दा हुद्दा ज्यामी कर्मी फेरिए पालैपालो ,
बाह्रहातै कामको मेलो टाङ्गिएको हेर ।
सर्यो अघि सरल मान्छे छिर्यो जुग फेर्न,
भव्य भो त्यै मान्छे फिर्दा उदाङ्गिएको हेर ।
किन लाग्थ्यो दैलोझ्याल काठका पो हुन् ति ता,
ढुङ्गे किल्ला सिमानामै पसाङ्गिएको हेर ।
Posted by दीपक जडित at 8:53 PM3comments: Links to this post
पहिले लेखिएका तर ब्लगमा चढाउन नभ्याएका या भनौं पालो कुरेर बसेका गजलहरुको स-सानो चाङबाट यसपटकलाई पनि यौटा गजल ल्याएको छु । गजल ग्रुपमा यस गजललाई बाँड्दा अहिले भएको मतलाको एक(पहिलो)मिसरा(हरफ)मात्र एक शेर हुने हिसाबले प्रस्तुत गरेको थिएँ । त्यसबेला मलाई कुनै शेरहरु स्वायत्त भएनन् भन्ने चिन्ता छँदैथियो । त्यसैले अहिले यस गजललाई दुई तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकिने हिसाबले बनाएर दुई तरिकाले नै राखेको पनि छु ।
पहिलेको तरिकाले -
जे मन लाग्छ गर प्रिय ।
मान्दिनं म डर प्रिय ।
तिम्रै छ आश र प्रिय,
तिम्रै लाग्छ भर प्रिय ।
हावा हूरी छेक्ने न्यानो,
खोजीरँ'दा घर प्रिय,
भन्यौ 'आउ सँगै बसौं,
मेरो को पो छ र' प्रिय ।
समाजले सानो भनि,
पार्दा पर-पर प्रिय ।
मेरो गोत्र थर प्रिय ।
जैले देखि तिमीतिर,
आएँ वर-वर प्रिय,
जून जस्तै फूल जस्तै,
फुल्यो यो अधर प्रिय ।
बसाउँला वस्ती यौटा,
सानो नै होस् तर प्रिय ।
मायाको सहर प्रिय ।
सम्झनामा चलोस् हाम्रो,
हावा सर-सर प्रिय ।
रोपौं चिनो चौतारीमा,
पिपलु र बर प्रिय ।
छोडी धर्ती जानु नै छ,
हुँदैनौं अजर प्रिय ।
बनोस् यूगौं यूग हाम्रो,
पिरती अमर प्रिय ।
अहिलेको तरिकाले -
जे मन लाग्छ गर प्रिय मान्दिनं म डर प्रिय ।
तिम्रै छ आश र प्रिय तिम्रै लाग्छ भर प्रिय ।
हावा हूरी छेक्ने न्यानो खोजीरँ'दा घर प्रिय,
भन्यौ 'आउ सँगै बसौं मेरो को पो छ र' प्रिय ।
समाजले सानो भनि पार्दा पर-पर प्रिय,
चाहिएन तिमीलाई मेरो गोत्र थर प्रिय ।
जैले देखि तिमीतिर आएँ वर-वर प्रिय,
जून जस्तै फूल जस्तै फुल्यो यो अधर प्रिय ।
बसाउँला वस्ती यौटा सानो नै होस् तर प्रिय,
नसके'नि बसाउंन मायाको सहर प्रिय ।
सम्झनामा चलोस् हाम्रो हावा सर-सर प्रिय,
रोपौं चिनो चौतारीमा पिपलु र बर प्रिय ।
छोडी धर्ती जानु नै छ हुँदैनौं अजर प्रिय,
बनोस् यूगौं यूग हाम्रो पिरती अमर प्रिय ।
त्यसो त काफिया अक्षरहरु दोहोरिएका गजलहरु प्रसस्तै नभेटिने होइनन् र पनि मैले नदोहोर्याउने गरी लेख्ने कोसिस गरेको हुन्छु प्राय। यसमा भने 'स' र 'श' लेखाईमा अलग तर ध्वनीको हिसाबले एकै हुने दोहोरिएको छ । आफ्नो दर अनुशार औसतमा दरिएको हुनाले जानीजानी छोडेको हुँ यसलाई ।
Posted by दीपक जडित at 11:29 PM 10 comments: Links to this post
Posted by दीपक जडित at 4:50 PM7comments: Links to this post